Jeruselem bụ obodo ikpe ọbara mara (1-16)
Ndị Izrel yiri ọla na-abaghị uru ọ bụla (17-22)
Ihe a ga-eme ndị Izrel na ndị ndú ha (23-31)
22 Jehova gwara m okwu ọzọ, sị: 2 “Nwa nke mmadụ, ì jikerela ikwu na ikpe mara obodo a na-egbu ndị mmadụ* n’ime ya+ nakwa ime ka ọ mata arụ niile ọ na-akpa?+ 3 Ị ga-asịkwa, ‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị: “Obodo a na-egbu ndị mmadụ*+ n’ime ya, oge gị eruwela.+ Ị kpụrụ arụsị dị iche iche na-asọ oyi* ka i jiri ha merụọ onwe gị.+ 4 Ikpe mara gị n’ihi ndị e gburu* n’ime gị.+ Arụsị na-asọ oyi ndị ị kpụrụ emeela ka ị ghara ịdị ọcha.+ I meela ka oge gị belata. Afọ a ga-ata gị ahụhụ eruola. Ọ bụ ya mere m ga-eji mee ka mba niile na-achị gị ọchị, meekwa ka obodo niile na-akwa gị emo.+ 5 Obodo ndị dị gị nso na ndị dị gị anya ga-akwa gị emo+ n’ihi na ị bụ obodo nwere aha ọjọọ na nke ọgba aghara juru na ya. 6 Onyeisi ọ bụla n’Izrel na-eji ikike o nwere egbu mmadụ.*+ 7 Ndị bi n’ime gị na-eleda nne na nna ha anya.+ Ha na-erigbu onye mbịarambịa. Ha na-emegbukwa nwa na-enweghị nna* na nwaanyị isi mkpe.”’”+ 8 “‘Ị na-eleda ebe nsọ m anya. Ị na-emebikwa ụbọchị izu ike m.+ 9 Ndị nkwutọ obi ha dị n’igbu mmadụ* bi n’ime gị.+ Ha na-anọ n’elu ugwu eri ihe e ji chụọ àjà. Ha na-emekwa omume rụrụ arụ n’ime gị.+ 10 Ha na-anọ n’ime gị edina nwunye nna ha.*+ Ha na-edina nwaanyị nọ ná nsọ ya, nke nsọ ọ nọ mere ka ọ ghara ịdị ọcha.+ 11 N’obodo gị, nwoke na-edina nwunye nwoke ibe ya.+ Nwoke ọzọ na-edina nwunye nwa ya, nke bụ́ omume rụrụ arụ.+ Nwoke ọzọ na-edina nwanne ya nwaanyị, nwa nna ya mụrụ.+ 12 Ndị bi n’ime gị na-ana aka azụ* iji gbuo mmadụ.*+ Ha na-agbazinye mmadụ ihe ka ha nata ya ọmụrụ nwa+ ma ọ bụ ka ha rite uru. Ha na-egwukwa ndị agbata obi ha wayo.+ N’eziokwu, unu echefuola m kpamkpam.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 13 “‘Obi adịtụdịghị mụ mma n’ihi otú ndị bi n’ime gị si eji aghụghọ enweta ihe ga-abara naanị ha uru, nakwa n’ihi mmadụ ha na-egbu.* 14 Obi ọ̀ ga-esi unu ike, aka agharakwa ịna-ama unu jijiji ụbọchị m ga-ata unu ahụhụ?+ Ọ bụ mụnwa, bụ́ Jehova, kwuru ihe a. M ga-emekwa ihe. 15 M ga-achụsasị unu ná mba dị iche iche, meekwa ka unu gbasasịa n’ala dị iche iche.+ M ga-emekwa ka unu kwụsị ịkpa àgwà rụrụ arụ.+ 16 A ga-emenye unu ihere ná mba dị iche iche. Unu ga-amarakwa na m bụ Jehova.’”+ 17 Jehova gwara m okwu ọzọ, sị: 18 “Nwa nke mmadụ, ndị Izrel aghọọla ọla na-abaghị uru n’anya m. Ha niile bụ ọla kọpa na gbamgbam na ígwè na nkume led* ndị dị n’ime nnukwu ọkụ. Ha aghọọla ọlaọcha na-abaghị uru.+ 19 “N’ihi ya, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: ‘Ebe ọ bụ na unu niile aghọọla ọla na-abaghị uru,+ m ga-achịkọta unu na Jeruselem. 20 M ga-eji iwe na ọnụma chịkọta unu otú ahụ e si achịkọta ọlaọcha na ọla kọpa na ígwè na nkume led* na gbamgbam wụba n’ime nnukwu ọkụ, fụọ ha ọkụ ka ha gbazee. M ga-afụ unu ọkụ ka unu gbazee.+ 21 M ga-achịkọta unu ma jiri ezigbo iwe fụọ unu ọkụ.+ Unu ga-agbazekwa n’obodo unu.+ 22 Otú ahụ e si agbaze ọlaọcha n’ọkụ, ka a ga-esi gbazee unu n’obodo unu. Unu ga-amarakwa na mụnwa, bụ́ Jehova, na-ewesa unu ezigbo iwe.’” 23 Jehova gwakwara m okwu ọzọ, sị: 24 “Nwa nke mmadụ, gwa ndị bi na Jeruselem, sị, ‘N’ụbọchị m ga-ewesa ala unu iwe, a gaghị eme ka ọ dị ọcha, mmiri agaghịkwa ezo na ya. 25 Ndị amụma ndị nọ na ya na-agba izu ihe ọjọọ ha ga-eme.+ Ha dị ka ọdụm na-agbọ ụja, nke na-adọgbu anụ.+ Ha na-egbu ndị mmadụ.* Ha nọ na-akpakọba akụ̀ na ihe ndị bara ezigbo uru. Ha emeela ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị gbara aka di. 26 Ndị nchụàjà nọ na ya emebiela iwu m.+ Ha na-emerụkwa ebe nsọ m.+ Ha amaghị ihe dị iche n’ihe dị nsọ na ihe na-adịghị nsọ,+ ha anaghịkwa eme ka ndị mmadụ mata ihe dị iche n’ihe dị ọcha na ihe na-adịghị ọcha.+ Ha anaghị edebe ụbọchị izu ike m. E nweghịkwa ihe ha ji m kpọrọ. 27 Ndị isi nọ n’ime ya yiri anụ ọhịa wolf ndị na-adọgbu anụ. Ha na-emerụ ndị mmadụ ahụ́, na-egbu ndị mmadụ* iji nweta ihe ga-abara naanị ha uru.+ 28 Ma, ndị amụma nọ n’ime ya ekpuchiela ihe ọjọọ ha na-eme otú e si eji nzu etechi ahụ́ ụlọ. Ha na-ahụ ọhụụ ụgha. Ha na-agbakwa afa ha ji eduhie ndị mmadụ,+ na-asị: “Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị,” mgbe Jehova na-asịghị ihe ọ bụla. 29 Ndị ala ahụ na-erigbu mmadụ, na-apụnarakwa mmadụ ihe.+ Ha na-emegbu ogbenye na onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya. Ha na-erigbu onye mbịarambịa, na-ekpekwa ya ikpe arụrụala.’ 30 “‘M nọ na-achọ nwoke, bụ́ onye obodo ha, onye ga-arụzi mgbidi ahụ e ji nkume rụọ ma ọ bụ onye ga-eguzo n’ebe a kwaturu akwatu ná mgbidi ahụ ka o kwuchite ọnụ ndị obodo ahụ, ka m wee ghara ibibi ya,+ ma e nweghị onye m hụrụ. 31 N’ihi ya, m ga-eji ezigbo iwe mee ha ihe. M ga-ebibi ha otú ọkụ si ebibi ihe. M ga-eme ka ha jiri isi ha buru ihe ha metara.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a.”
^ Na Hibru, “a na-awụfu ọbara.”
^ Na Hibru, “ọbara a wụfuru.”
^ Na Hibru, “awụfu ọbara.”
^ Na Hibru, “n’ịwụfu ọbara.”
^ Na Hibru, “ekpughe ọtọ nna ha.”
^ Ma ọ bụ “na-eri ngarị.”
^ Na Hibru, “wụfuo ọbara.”
^ Na Hibru, “ọbara ha na-awụfu.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi dị iche iche.”